केही दिनअघि आफैलाई पढाउने गुरुले ममीको हत्या गरेपछि, यस्तो छ बालक सुमन नेपालीको बयान ! « Surya Khabar
केही दिनअघि आफैलाई पढाउने गुरुले ममीको हत्या गरेपछि, यस्तो छ बालक सुमन नेपालीको बयान !
काठमाण्डौ । ममी (लक्ष्मी नेपाली) त्यस दिन (मंगलबार) गाउँकै छिमेकी च्याङ्बा तामाङको कोदो टिप्न जानुभएको थियो । म दुई वर्षको सानो भाइ सुशीललाई हेरेर घरमै बसेको थिएँ। त्यहीबीचमा भाइ धेरै रोयो । सायद आमाको दूध खान खोजेको थियो।
मेरो स्कुलमा सामाजिक विषय पढाउने सर (हीरा लामा) र उहाँको आमा (काइलीमाया तामाङ) मोटरसाइकलमा आएर हाम्रो घर जाने बाटोमा बसेका रै’छन्। हामी आफ्नै बाटोतिर थियौँ। तर, बाटो रोकेर सरकी आमाले बोक्सी, राँऽऽ, रऽऽ‘ भन्दै मेरो ममीलाई लखेट्न खोज्नुभयो। तर, ममी भाग्नुभएन। त्यसपछि हीरा सरले समेत समातेर मेरी ममीलाई नजिकै रहेको सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा लगे। त्यो हाम्रो विद्यालय हो, जहाँ हिरा सरले सामाजिक शिक्षा पढाउनुहुन्छ।
नाम्लो लिएर हिरा सर आफैँले ममीलाई गेटमा बाँध्नुभयो। सुरुमा घाँटी र कुममा बाँधेर हिरा सरले ममीलाई कुट्न थाल्नुभयो । त्यतिन्जेलसम्म हिरा सरको आमा अन्त कता जानुभयो थाहा भएन। पछि त दिसा लिएर आउनुभयो।
पछि म र मेरो अंकल (दिनेश नेपाली) मिलेर दुबैतिरको कुममा उचालेर घर पुर्याुयौँ। बेलुकी घर गयौँ। अर्को दिन बुधबार बुबा मिलन नेपाली काठमाडौंबाट घर आउनुभयो। बुबा काठमाडौँमा घर बनाउने मजदुरी गर्नुहुन्छ। त्यो दिन अस्पताल जाने कुरा भयो। तर, ढिलो भएकोले जान सकिएन। धुलिखेल आउन तीन घन्टा लाग्छ भन्ने कुरा भयो। बिहीबार बिहान ममी उठ्न सक्नुभएन।
त्यसैले गाउँको स्वास्थ्यचौकी पुगेर हामीले औषधि लिएर आयौँ। घरमा ममीलाई औषधि दिँदै थियौँ। आँगनमा पुलिस आइपुग्यो। पुलिससँगै हिरा सर र गाउँका धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। गाउँका १५ जनाको हस्ताक्षर गरेर मिलापत्र गरियो। मिलापत्र भएपछि प्रहरी फर्किए, गाउँले घरघर गए। बेलुका बुबा र म सँगै सुत्यौँ।
ममी नजिकैको टहरामा सुत्नुभयो। बिहान हजुरआमाले मलाई उठाउनुभयो। तिम्रो आमा अहिलेसम्म किन उठिन गएर बोलाएर लिएर आउ भनेर पठाउनुभयो। म टहरामा पुग्दा ममी ओछ्याननजिकै भुइँमा ढलिरहनुभएको थियो। मैले बोलाउँदा बोल्नुभएन। अलिअलि सास फेरिरहनुभएको थियो। मैले पानी खुवाएँ। आमाआमा भनेर बोलाएँ। उहाँ बोल्नुभएन।
म चिच्याएको सुनेर गाउँलेहरु जम्मा भए। गाउँलेहरुले पुलिसलाई खबर गरे। सबैजना जम्मा भएका थिए, त्यतिन्जेलसम्म मेरी ममीको मृत्यु भइसकेको थियो। मैले हिरा सरलाई देखाएर पुलिसलाई भनेँ, ‘मेरी ममीलाई डोरीले बाँधेर दिसा खुवाउने, टाउकोमा चिर्पटले हान्ने र छातीमा लात्तीले हान्ने मान्छे यही हो।’
मैले घटना सुनाएपछि हिरा सर भाग्न खोजे। तर, पुलिसले उनलाई पक्राउ ग¥यो। पुलिस अंकलहरुले बोलाएको हुनाले म हिजो (शुक्रबार) धुलिखेल आएको हुँ। तर, सँगै मेरो बुबालाई पनि भित्र थुनेर राखेको छ। किन थुनेको मलाई थाहा छैन। आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।